Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada OYSU faraca San Diego oo ka qaybgalay Ololaha Xasuuqa looga soo horjeedo
Ururka Dhalinyarada OYSU faraca San Diego oo ka qaybgalay Ololaha Xasuuqa looga soo horjeedo
San Diego, California: Waxaa lagu qabtay shalay oy bishu ahayd April 7, 2013 Beerta loo yaqaano Carmel Valley’s Ocean Air Community Park, Ololihii 2aad ee Socodka lagaga soo horjeedo Xasuuqa. Ujeedada Socodka ayaa ahaa in lagu fahamsiiyo dadweynaha oo lagu soo jeediyo garashadooda say uga soo horjeedaan Xasuuqa Bani-aadamka lagu hayo ee meela kala duwan oo dunida ah ka socda. Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) oo caalamka ka wada in la arko xasuuqa lagu hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ayaa ka mid ahaa haya’adaha lagu martiqaaday inay soo bandhigaan dhibaatada lagu hayo shacabkooda.
Wuxuu ku bilowday Ololaha socod ahaa 2ba mile oo boqolaal qof oo ka kala socda haya’ado kala duwan oo sita boodhadh iyo calaamado kala duwan oy ku qoran yihiin -NO more Genocide- Xasuuq dambe yaanu dhicin ayaa ka qaybqaatey socodka. Waxayna ballan ku qaadeen inay wadaan ololahan ilaa laga joojinayo xasuuqa ka socda Ogadenya oo la mid ah kuwii loo gaystay shucuubtaCambodia,Rwanda,Bosnia, iyoDarfur.
Waxaa ka mid ah dadka ka hadlay madasha Gudoomiyaha OYSU faracaSan Diegomudane Maxamadnoor Maxmud Cabdi isagoo uga waramay boqolaalka ka soo qaybgalay ololaha waxqabadka ururka Dhalinyarada OYSU. Waxaa kaloo uu ka hadlay Maxamadnoor dhibaatada lagu hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya oo xukuumado Itobiya ah oo naxariis laawayaal ah ay isaga dambeeyeen. Wuxuu si aad ah uga hadlay dhibaatada cuna-qabataynta ah ee lagu hayo shacabka iyagoo loo diiday raashinkii inuu gaadho sidoo kalena laga eryay haya’adihii samafalka iyo saxaafadii caalamkaba.
Waxaa joogay madasha wariyayaal ka kala socda haya’ado kala duwan oo so warinayay iyo TV-yada San Diegooo wareysiyo ka qaaday dadkii meesha isugu yimid.
Waxay ballan qaadeen OYSU faracaSan Diegoinay sii wadi doonaan ololaha ay ku baraarujinayaan dadka Maraeykanka ah gaar ahaan ardayda dhigata JaamacadahaCalifornia. Waxaa u astaamaysan inay socdaalka ku xiga ku qabtaan Los Angels Axadda soo socota ee bishu ay tahay 14ka. Waxayna ugu baaqayaan dhamaan Dhalinyarada inay kala soo qaybgalaan waajibaadkan lagu cambaareynayo gumaysiga Itobiya dhibaatada uu ku hayo shacabkooda, si loogala xisaabtamo falal dambiyeedkaa xukuumadda Itobiya oo aan loo duudsiyin shacabkooda.
Cabdiraxmaan Hollwood/San Diego.